တစ်စီးအတွက်သေးငယ်တဲ့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်များ၏အမည်များဘာတွေလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Gypsophila paniculata အပန်းဖြေတဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေပန်းစည်းဖန်တီးလေ့ရှိတယ်။
အသေးစားအဖြူပန်းပွင့်စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ပန်းစည်းပါစေ။ ပန်းပွင့်သောအရောင်အဆင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကို၏အသွင်အပြင်ပေးပါ။ ဒီစက်ရုံ Gypsophila paniculata တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
ဤသည်စက်ရုံဟုခေါ်သည် Gypsophila paniculata။ အရောင် (အဖြူ, ပန်းရောင်, မှောင်မိုက်ပန်းရောင်) အရောင်နဲ့အရွယ်အစားကွာခြားသောဤစက်ရုံအများအပြားဥယျာဉ်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်နှစ်ဆပန်းပွင့်နှင့်အတူပုံစံများရှိပါတယ်။
ဒါဟာနီးပါးတိုင်းပန်းပွင့်ဆင်ယင်ခြယ်သကြောင်းအံ့သြဖွယ်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့ Gypsophila paniculata သူတို့ကိုခေါ်နေကြတယ်, သင် 100% အပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အတွေ့နိုင်ပါသည်ပူးတွဲပါဓါတ်ပုံတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ဓာတ်ပုံတွင်ရှိသောပန်းများမှာ Gypsophila paniculata ဖြစ်သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးပန်းအချို့။ သူတို့ကအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြည့်ပါ, မည်သည့်ပန်းစည်းကိုအလှဆင်အလှဆင်, အထူးခေတ်မီကြည့်ရှု။ စကားမစပ်ငါနွေရာသီမှာပြတင်းပေါက်ပေါ်မှာငါပွင့်။
ငါမှားငါမပါလျှင်တစ်ဦးပုံထဲမှာတင်ဆက်အဆိုပါပန်းစည်း, ငါတို့သည်ကလေးရဲ့အသက်ရှု paniculate ကြည့်ပါ။ သူတို့တစ်တွေကြီးမား obmom ၏ထင်ယောင်ထင်မှားဖန်တီးအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ဤအသေးစားနှစ်ဆပန်းပွင့်ပွင့်၏ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲအလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြသည်။ စကားမစပ်အဲဒီပန်းပွင့်မယ့်အဖြူမရှိကြပေ။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,342 စက္ကန့်ကျော် Generate ။